Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Mahaiza mamindra !
INTY SY NDAY : Mahaiza mamindra !
“Tsy misy mahay mamindra toy ny akoho fa rehefa eo ambony sahafa, solafaka ihany”. Isan’ny teny Malagasy avo karazana sy ambony lenta ary feno fahendrena io. Entina milaza fa “ilaina ny mitandrina rehefa mamindra mba tsy ho solafaka”. Eo amin’ny raharaham-pirenena koa dia takiana ny fahaiza-mamindra, fahaiza-manao, fitandremana…
Handingana taona iray indray isika afaka roa andro. Zavatra vaovao no antenain’ny rehetra amin’io taona 2021 io. Izany vaovao izany dia tsy amin’ny endriny ivelany fotsiny fa ny vontoatiny indrindra. Izany hoe mba vaovao mitera-bokatsoa ho an’ny rehetra, vaovao hitondra fivoarana ho an’ny tsirairay, vaovao hampiakatra ny fari-piainan’ny ambanilanitra izay latsaka anaty hantsana, vaovao hitondra avo ny lazan’i Madagasikara ka hitovy laharana amin’ireo firenena misandratra amin’izao fotoana….
Miantefa voalohany indrindra amin’ny fitondram-panjakana izany. Mba ho mpitondra fanjakana tsy mpanao anjambany ka ny zava-bita tamin’ny taona 2019 na ny talohan’izany indray no sanatriavin’ny vava, lasa fitaratra sy nalaina tahaka. Tsy vaovao izany fa ny tonta ihany.
Ao anatin’izany tontolo tokony hikatsahana zava-baovao ka maha-lohalaharana ny mpitondra fanjakana izany ny fiheverana ho zava-dehibe ny fikatsahana mandrakariva ny risi-pom-bahoaka mba hampahomby ny tian-katao.
Eo amin’io tian-katao io koa, raha ny fepetra rehetra efa voaporofo nandritra ny ampolon-taonany maro fa tsy nahavita nampivoatra ny fiainan’ny vahoaka Malagasy no hamboamboarina sy hanaovana fihetseham-po eo, dia tsy hahita zava-baovao mihitsy ny taranaka ho avy. Isan’izany ny mbola hiankohofana amin’ny Banky Mondialy sy ny FMI.
Ny zava-baovao tokony ho hita ary azo antoka ny hisehoany eto ka hitondra ny vahoaka ho any amin’ny sehatra maha-olombelona azy, mitovy laharana amin’ny vahoaka efa misondrotra, dia zava-baovao vokatry ny fisahanan’ny olona tena mpanao politika sady tena tia tanindrazana ny fitarihana ny seha-pitantanan-draharaham-panjakana rehetra.
Vantanina ny resaka na raha ambara amin’ny fomba hafa dia tsotra: tsy afaka hampahomby ny velirano nofaritan’ny filohampirenena raha olona manam-pahaizana fotsiny no hisahana ny raharaha any amin’ny fitarihana ny ministera isanisany any. Ny manam-pahaizana amin’izao fotoana, na tanora erotrerony aza izy, dia te hihazakazaka hitovy laharana amin’ireo firenen-dehibe efa mandroso, ka na ny ampahany kely dia kely ihany amin’ny vahoaka aza no mitovy amin’ny Amerikana mpanan-karena, ohatra, fa ny 97%-n’ny Malagasy, lasa toy ny mena hoditra any Amerika, dia izay no filamatra. Izany hoe ny Mena Hoditra tompon-tany dia voahilika any amin’ny tany hay fa ny vahiny no manjaka eto sy mitavana ny harenan’ny firenena eto.
Efa famerimberinay eto fa “azo atao tsara ny manao an’ity Madagasikara ity ho kiandriandriana, saingy iza no hisitraka azy”? Ny vahoaka sa ny vahiny?
Manomboka amin’io taona 2021 ho avy io, misarika ny fisainan’ny mpitondra fanjakana sy mpanapaka izahay mba hitandrina sy hahay mamindra sao hanenenana, satria “ny vahoaka efa ela nijaliana, tsy handefitra na hangina”, hoy ny hiran’ny Fikambanan’ny Mpianatra Malagasy Fiaviana (Aeom) izay tany amin’ny taona 1974 tany.